Ethereum သည်အရေးတကြီးလိုအပ်နေသည့်အနီးအနားတွင်ရှိနေသည်။ ဤနေရာတွင်ငြင်းပယ်မှုသည် Spark Move အားဒေါ်လာ ၃၀၀ အထိရနိုင်သည်
Where it trends next now depends primarily on its reaction to the resistance region that starts around $380, as well as Bitcoin ရဲ့ reaction to $11,000.
Credible Crypto ၏ပုံရိပ်။ မှတဆင့်ဇယား TradingView.
The coming few days should reveal insight into just how significant this price region will be for where Ethereum ခေတ်ရေစီးကြောင်း in the coming few weeks.
Unsplash မှပုံရိပ်။ ထံမှဇယားများနှင့်စျေးနှုန်းဒေတာ TradingView.
Tags: အရေးပါ, Ethereum, လှုပ်ရှား, ရောကျခါနီးပွီ, ြငင်းပယ်ခြင်း, ခုခံခြင်း, မီးဖွါး